I-iPad Pro - Izindaba ze-iPhone | Izindaba ze-IPhone
El iPad Pro kulapha. Uhlobo lobuchwepheshe be-Apple tablet luphuma kakhulu ngenxa yesikrini sayo esingu-12,9-intshi kanye nokuxazululwa kwamaphikseli angama-2.732 x 2.48, into enikeza ubukhulu bamaphikseli angama-264 nge-intshi.
Izici ze-IPad Pro
Ukuhamba kalula nge-iOS 9 nesikrini sayo esikhulu, i-iPad Pro iza ifakwe i I-chipset ye-Apple A9X lokho kuthembisa ukuphindaphindeka ngo-1,8 ukusebenza kwayo maqondana ne-Apple A8X. Ngokuqondene ne-GPU, i-qualitative leap nayo ibalulekile ukukwazi ukujabulela imidlalo noma izinhlelo zokusebenza zobungcweti zokuhlelwa kwevidiyo, ukwakheka kwezithombe, ukuzenzakalela kwehhovisi nokunye okuningi.
Mayelana nesigaba sezithombe, i-iPad Pro ifakwe ifayili le- Ikhamera yangemuva eyi-8 Megapixel iSight Ilensi yalo enikezela ukuvula kwe-f / 2,4. Iyakwazi ukuqopha ividiyo nge-HD ephelele kuma-fps angama-30 noma ihamba kancane kuma-fps ayi-120.
Ngaphandle kokukhuphuka kokusebenza, i-iPad Pro inikezela ngefayela le- ukuzimela kuze kube ngamahora ayi-10 yokusetshenziswa okuqhubekayo.
Ipensela le-Apple le-iPad Pro
Isikrini se-iPad Pro singasetshenziswa ngokubambisana ne Apple ipensela, usiba olusha oluvela enkampanini yama-apula oluthembisa ukubona isikhundla, ukuthambekela nengcindezi esiyisebenzisayo kutho.
Thatha amanothi noma udwebe nge-iPad Pro Ithembisa ukuba yinto ehlukile ngalesi sesekeli esizodinga ukusithenga ngokwahlukana kepha noma kunjalo, kuzoba yinto edingekayo kwabaningi.
Ukutholakala kwe-IPad Pro
I-iPad Pro izotholakala ngesiliva, igolide noma i-space grey kusukela ngoNovemba kuzinguqulo ezilandelayo:
I-WiFi engu-128 GB.
I-128 GB WiFi + 4G.
Izindaba ze-IPad Pro
I-Apple kungenzeka ibe nenkinga yokuhlanganisa i-MagSafe ku-iPad Pro
Por U-Angel Gonzalez kwenza Izinsuku ze-3 .
Amahemuhemu aqala ukukhomba kancane ekubanjweni komcimbi we-Apple engxenyeni yokuqala…
Kungenzeka ukuthi i-Apple isebenza ku-15-inch OLED iPad Pro
Por UToni Cortés kwenza Izinsuku ze-4 .
Namuhla nje bengixoxa nengane yami mayelana ne-iPad Air yayo. Ujabulile ngaye, kanye ne-Apple Pencil 2 yakhe….
I-Apple icabanga ukuguqula i-iPad Pro futhi iyenze ivundle
Por UToni Cortés kwenza Izinyanga ze-4 .
Ekhaya singamalungu omndeni amane futhi ngamunye une-iPad yakhe. Futhi iqiniso ukuthi ukubuka ...
I-AirPods Pro entsha ne-iPad Pro enengilazi emuva ngeke zifike ngo-2022 ngokusho kukaMark Gurman
Por U-Ignacio Sala kwenza Izinyanga ze-4 .
Enkulumweni yokugcina, abaningi bekungabasebenzisi abebelindele ukuthi ngesikhathi somcimbi, i-Apple izokwethula isizukulwane sesithathu esilindelekile ...
I-2020 iPad Pro isiyatholakala esigabeni esenziwe kabusha se-Apple
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-5 .
Uhlu lwemikhiqizo evuselelwe futhi eyenziwe kabusha yi-Apple iyaqhubeka nokukhula. Kulokhu, inkampani yaseCupertino ingeze ...
I-Logitech Combo Touch, ikhibhodi enhle kakhulu ye-iPad Pro yakho
Por ULuis Padilla kwenza Izinyanga ze-6 .
Sivivinye isibambi se-Lululook's magnetic iPad
ILululook isinikeza ukuma kwe-iPad eyenziwe ngokuphelele nge-aluminium futhi esebenzisa ozibuthe abanamandla ukugcina ...
I-HoveBar Duo nge-Twelve South, ukuma kwanoma yikuphi ukusetshenziswa ongakucabanga
Por ULuis Padilla kwenza Izinyanga ze-7 .
Sivivinye iHoverBar Duo kusuka eTwelve South, isitendi esivezwe esivumela ukuthi ubeke i-iPad yakho ezindaweni eziphakeme futhi ...
Isikhangiso se "sung" se-iPad Pro lapho i-Apple ikhombisa khona amandla ayo
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-7 .
Siyaqiniseka ukuthi abangaphezu koyedwa kulabo abakhona basacabanga ukuthi i-iPad Pro eyethulwe kulo nyaka ayikho ...
I-iFixit isibonisa isikrini se-Mini LED se-iPad Pro entsha
Por UToni Cortés kwenza Izinyanga ze-8 .
Sesivele sine-iPad Pro entsha phakathi kwethu. Kwethulwe, kwa-odwa, futhi kwalethwa. Futhi njengenjwayelo, abafana abavela ...
ISatechi Yethula i-6-Port Aluminium Portable Stand ye-iPad Pro
Por U-Ignacio Sala kwenza Izinyanga ze-8 .